Gini mere odi nkpa icheta Ista na ekeresimesi | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Disemba 24, 2020
Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla hụrụ oge Krismas n’anya. Ọkụ na-abụ ememme. Omenala ezumike nke ọtụtụ ezinụlọ nwere na-adịgide ma na-atọ ụtọ. Anyị na-apụ wee chọta osisi Krismas kwesịrị ekwesị iji gaa n'ụlọ ma chọọ mma mgbe egwu Krismas na-egwu na redio. My nwunye na ụmụaka n'anya Christmas oge, na mgbe niile Andy Williams na-echetara anyị nke ọ bụla Christmas oge nke bụ oge kacha mma nke afọ.
Ihe masịrị m n’oge ekeresimesi bụ na nke a bụ naanị oge n’afọ mgbe ọ dị mma ịbụ abụ gbasara nwa ọhụrụ Jesu. Chee echiche banyere egwu ekeresimesi niile ị na-anụ na redio na ole n'ime ha na-abụ abụ banyere onye nzọpụta ma ọ bụ eze a mụrụ n'ụbọchị a.
Ugbu a, maka ndị nwere ike ịmụtakwu ihe, ọ yikarịghị ka a mụrụ Jizọs na Disemba 25th; nke ahụ bụ ụbọchị anyị họọrọ ime emume ncheta ọmụmụ ya. Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ inwe mkparịta ụka ahụ, anyị nwere ike, mana nke ahụ abụghị isi nke edemede a.
Nke a bụ ihe m chọrọ ka ị chee echiche banyere taa: Ọ́ bụghị ihe ịtụnanya na nkasi obi ndị mmadụ na-enwe maka ịbụ abụ banyere nwa ọhụrụ Jizọs Anyị na-ewepụta oge iji mee emume ncheta ọmụmụ ya, dịka ndị mmadụ si eme emume mgbe a mụrụ ụmụaka ndị ọzọ. Ma, anyị maara na Jizọs bịara nwụọ maka mmehie anyị na ka ọ bụrụ onye nzọpụta nke ụwa. Ọ bụghị naanị mmadụ, mana ọ bụ Emmanuel onye Chineke bụ n’etiti anyị.
Mgbe ịmalitere ịhapụ akụkọ ekeresimesi wee malite ịkwaga n’akụkọ Ista, mgbe ahụ ihe ga-eme. Aka kụrụ aka na ememme a ga-ebelata. Onweghi onwa na-egwu egwu nke onwu na mbilite n’onwu nke Jisos. Gịnị kpatara nke a? Nke a bụ ihe m na-ede n’akwụkwọ m taa, na-enyere gị aka ime ka Kraịst dị n’otu n’oge Krismas ya na Kraịst n’oge Ista.
Gịnị mere ụwa ji hụ Jizọs n'anya n'oge ekeresimesi?
Mgbe ndị mmadụ na-eche maka ụmụaka gịnị ka ha na-echekarị? Mara mma, na-adụ na obere ụyọkọ ọ ofụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe mmasị ijide ụmụ ọhụrụ, bulie ha, pịakọta ha na agba. Ikwu eziokwu, ahụchaghị m ụmụaka n'anya. Ahụ erughị m ala ijide ha wee zere ha. Oge a kara aka maka m bịara mgbe m nwere nwa nwoke. Mmetụta m nwere n’ebe ụmụaka nọ na maka ijide ha agbanwewo kemgbe ahụ; ugbu a ka m hụrụ ha n'anya. Agbanyeghị, agwara m nwunye m na akpa anyị juputara - anyị ekwesịghị itinye ihe ọ bụla na akpa anyị.
Nke bụ eziokwu bụ na ndị mmadụ hụrụ ụmụaka n'anya maka aka ha dị ọcha na n'ihi na ha anaghị eyi mmadụ egwu. Onweghi onye nwata na-eyi egwu. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ na akụkọ ntolite nke Christmas bụ ndị. Lee otu Matthew si dekọọ ya:
“Mgbe a mụsịrị Jizọs na Betlehem nke dị na Judia, n'oge Eze Herọd, ndị Magus si n'ebe ọwụwa anyanwụ gara Jeruselem wee jụọ, sị: 'Olee ebe onye ahụ a mụrụ ịbụ eze ndị Juu nọ? Anyị hụrụ kpakpando ya mgbe o biliri wee bịa fee ya. Mgbe Herọd nụrụ ihe a, ahụ́ erughị ya ala, ya na ndị niile nọ na Jeruselem ”(Matiu 2: 1-3).
Ekwere m na ọgba aghara a bụ n'ihi na Herọd chere na a na-eyi ya egwu. Ike ya na alaeze ya nọ na nsogbu. A sị ka e kwuwe, ndị eze na-anọdụ n’ocheeze, eze a ọ̀ ga-anọchi n’ocheeze ya? Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị nọ na Jerusalem na-eme emume ọmụmụ Jizọs, ha niile anọghị na mmemme ahụ. Nke a bụ n'ihi na ha ahụghị nwa ọhụrụ Jizọs, ha hụrụ eze ahụ bụ Jizọs.
Ihula, otutu ndi n’uwa anyi achoghi itule Jisos karia ihe eji etinye ya. Ọ bụrụhaala na ha nwere ike idebe ya n'ihe e ji etinyere anụ ụlọ nri, ọ bụ nwa aka ya dị ọcha na nke na-adịghị eyi egwu. Ma, onye a nke dina n'ihe e ji etinyere anụ ụlọ nri bụ onye ga-anwụ n'obe. Eziokwu a na-abụkarị nke ndị mmadụ na-anaghị atụle n’oge ekeresimesi n’ihi na ọ na-ama ha aka ma na-eme ka ha zaa ajụjụ ọtụtụ ndị chọrọ izere.
Gịnị mere ndị mmadụ ji ese okwu banyere Ista Jizọs?
Notwa anaghị eme emume Ista Jesu nke ukwuu maka na ọ na-amanye anyị ịza ajụjụ siri ike banyere onye ọ bụ na onye anyị bụ. Ista Jizọs na-amanye anyị ịtụle ihe o kwuru banyere onwe ya ma kpebie ma ihe ndị o kwuru ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na ha abụghị. Ọ bụ otu ihe mgbe ndị ọzọ kwupụtara na ị bụ onye nzọpụta, nke ahụ bụ Jizọs nke ekeresimesi. Ọ bụ ihe ọzọ mgbe ị mere onwe gị nkwupụta ndị a. Nke a bụ Jizọs nke Ista.
The Ista Jesus-eme ka ị na-eche ihu gị mmehie ọnọdụ, ịza ajụjụ: a Jesus bụ onye ma ọ bụ na anyị kwesịrị ịchọ ọzọ? Ọ bụ n’ezie eze nke ndị eze na onyenwenụ kasị ndị nwenụ niile? Ọ bụ Chineke n’ezie n’anụ arụ ka ọ bụ naanị mmadụ ọ sịrị na ya bụ? Ista a Jesus mere ka ị zaa ihe m kwenyere bụ ajụjụ kachasị mkpa na ndụ Jizọs jụrụ ndị na-eso ụzọ ya.
"'Ma gị?' ụka. 'Donye ka ị sịrị na m bụ?' "(Matiu 16:15).
Jesus ekeresimesi a chọghị ka ị zaa ajụjụ a. Ma Ista Jesus ee. Azịza gị nye ajụjụ a na-ekpebi ihe niile gbasara otu ị ga-esi ebi ndụ a na, nke ka mkpa bụ otu ị ga-esi nọrọ ebighi ebi. Nke a bụ eziokwu na-amanye ọtụtụ mmadụ ka ha ghara ị bụsi oke egwu gbasara Ista Jesus maka na ị ga-amata onye ọ bụ.
Ekeresimesi Jesus mara mma ma dịkwa nro. Ememe Ngabiga Jizọs merụrụ ahụ ma tiwaa.
Ekeresimesi Jizọs bụ obere na aka ya dị ọcha. Ista Jizọs buru ibu karịa ndụ, na-emebi ihe ikwere na ya.
Ọtụtụ ndị mere ememme Jesus nke Krismas, ọ bụ mmadụ ole na ole kpọrọ ya asị. Ọtụtụ ndị kpọrọ Ista Jizọs asị, mana mmadụ ole na ole mere ya.
A mụrụ Jizọs nke Krismas ịnwụ. Ista Jizọs nwụrụ ka ọ dịrị ndụ ma nye ndụ.
Jisos nke ekeresimesi bu eze ndi eze na onye isi ndi nwenyi. Ista Jesus bụ Eze nke Ndị Eze na Chineke nke ndị nwenụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, eziokwu nke Krismas mere ka o doo anya site na eziokwu nke Ista.
Ka anyị mechie oghere ahụ
Amuru Jisos ka oburu onye nzoputa anyi, ma uzo nke idi onye nzoputa ga-abu ntu na obe. Ihe dị mma banyere nke a bụ na Jizọs họọrọ ịga n'okporo ụzọ a. Ọ họọrọ ịbụ Nwa Atụrụ Chineke ahụ na ịbịa were ndụ ya chụọ maka mmehie anyị.
Nkpughe 13: 8 na arutu aka na Jisos a dika nwa aturu ahu nke achuru n’iru tutu ntoala uwa. Na mgbe ebighi ebi gara aga, tupu e kee kpakpando, Jisos mara na oge a ga-abịa. Ọ ga-eri anụ (Christmas) nke a ga-emejọ ma gbajie (Ista). Ọ ga-eme ememe na adored (Christmas). Ọ ga-abụ onye a na-akwa emo, pịa ma kpọgide n’obe (Ista). Ọ ga-amụ site na a na-amaghị nwoke, onye mbụ na onye na-eme otú (Christmas). Ọ ga-ebili site na ndị nwụrụ anwụ dịka onye nzọpụta bilitere, onye mbụ na onye naanị ya mere (Ista). Nke a bụ otu ị ga - esi gbochi ọdịiche dị n’etiti ekeresimesi na nke Ista.
N'oge ekeresimesi, emela mmemme ọdịnala-ka ha dị ebube ma dịkwa egwu. Emela nri ma gbanye onyinye ma nwee anụrị. Nwee obi uto ma nwee oge ezumike, mana ka anyi ghara ichefu ezigbo ihe kpatara eji eme anyi. Anyị nwere ike ịgba Krismas n'ihi Ista. Ọ bụrụ na Jizọs abụghị onye nzọpụta a kpọlitere n’ọnwụ, ọmụmụ ya adịghị mkpa karịa nke gị ma ọ bụ nke m. Agbanyeghị, ọ bụ n'ihi na ọbụghị naanị na ọ nwụrụ kama o bilitere ọzọ bụ olileanya anyị maka nzọpụta. Na ekeresimesi a, cheta Onye Nzọpụta bilitere n’ọnwụ n’ihi na n’eziokwu, Jizọs bilitere n’ọnwụ bụ ezigbo ihe kpatara oge ahụ.